ကြက်ဥ, Inc | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ကြက်ဥ, Inc
ကြက်ဥ, Inc APK ကို
မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌, ဝဠာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကြက်သားကြက်ဥထဲမှာသော့ဖွင့်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျရွှေအလုအယက်အပေါ်ရနှင့်သင်တတ်နိုင်သလောက်များများကြက်ဥရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ။
Hatch ကြက်, ကြက်မအိမ်ဆောက်, ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအဆင့်မြင့်ကြက်ဥလယ်ယာတည်ဆောက်ရန်ယာဉ်မောင်းများနှင့်ကော်မရှင်သုတေသနငှားရမ်း။
၎င်း၏အဓိကမှာ incremental (clicker) ဂိမ်း, ဥ, Inc ကထူးခြားတဲ့ခံစားမှုနှင့်ကစားစတိုင်ပေးသောခြင်း simulation ဂိမ်းထဲကနေအများကြီး element တွေကိုအသုံးပြုသည်။ အဲဒီအစား menus တွေ၏, သင်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့ရောင်စုံ 3D ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကြက်တစ် swarm တစ်ကြည်နူးဖွယ်ခြင်း simulation နှင့်အတူတင်ပြကြသည်။ အမြော်အမြင်ရှိရှိသင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရွေးချယ်ရာတွင်အပြင်၌သင်တို့လည်းချောမွေ့ပြေးနှင့်အကျိုးရှိစွာကြက်ဥလယ်ယာသေချာစေရန်သင့်ရဲ့အရင်းအမြစ်များကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရပေမည်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားသမားဥ Inc မှရဲ့နောက်ကျောကို တင်. ခံစားနဲ့လှပတဲ့အသွင်အပြင်ကိုချစ်။ တစ်အံ့သြစရာကြက်ဥလယ်ယာတည်ဆောက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအကြောင်းအရာစူးစမ်းရန်သင့်အချိန်ကိုယူပါ။
ပိုများသောအတွေ့အကြုံရှိ incremental (clicker) ကစားသမားဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံးလိုအပ်သောကွဲပြားခြားနားသောပြဇာတ်စတိုင်များခြင်းဖြင့်ရရှိအရေးပေါ်ဂိမ်းနှင့်အတိမ်အနက်ကိုခစျြလိမျ့မညျ။ တစ်ဦးနက္ခတ္တဗေဒတန်ဖိုးကိုအတူ ginormous ကြက်ဥလယ်ယာရှိခြင်း၏အန္တိမရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိစေရန်, သင်သည်သင်၏အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ဖို့အများကြီးဂုဏ်သိက္ခာတစ်လျှောက်လုံးမဟာဗျူဟာဟန်ချက်ညီဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
- ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူရိုးရိုး, ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဂိမ်း
- ကြက်သား swarm!
- တစ်ဦးက "အသိုက်" Prestige စနစ်ကအမြဲအသစ်အ feeling ဂိမ်းရှိပါတယ်
- pixel စုံလင်သော UI ကိုနဲ့မှောင်မိုက်အရိပ်နှင့်အတူအံ့သြဖွယ် 3d ဂရပ်ဖစ်
- ဂူဂဲလ်အားကစားပြိုင်ပွဲအောင်မြင်မှုများ, ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ & Quests Play!
နွေဦး Update ကိုအပိုင်း II ကို!
- အဆိုပါစိန် Tophy
- အ Hyperloop
- Balance အပြောင်းအလဲများကို: မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များသည်ယခုအခါလျော့နည်းတန်ဖိုးရှိသော်လည်း, ဂုဏ်သိက္ခာကပိုတန်ဖိုးရှိအဖြစ် running ကြက်သားဆုကြေးငွေများနှင့်ကွာ သာ. ကြီးမြတ်ဝင်ငွေအကြီးအကျယ်ထုရိုက်သည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသစ်ကိုဂိမ်းအင်္ဂါရပ်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါဒီကဤချိန်ခွင်လျှာအပြောင်းအလဲများကသာပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်, လာမယ့် update ကိုတစ်ဦးပင်ပိုကောင်းစီးဆင်းမှုကိုမျှော်လင့်!
- မြောက်မြားစွာတိုးတက်မှုများနှင့် bug ပြင်ဆင်ခြင်းများ
29.67 ကို MB
Auxbrain Inc မှ